Dhamaan Ha Ku Khamaarin Istaraatiijiyadda Noolaha | Martech Zone
Ha Ku Khamaarin Dhamaan Istaraatiijiyadda Noolaha
Isniin, April 23, 2012 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
La yeeshay wadahadal aad u fiican mid ka mid ah macaamiisheenna dhammaadka usbuuca oo inta badan hubiya oo weydiiya jawaab-celin ku saabsan goobta, Analytics, iyo su'aalo kale oo ku saabsan istiraatiijiyadda suuq geynta. Waan jeclahay xaqiiqda ah inay ku hawlan yihiin, in badan oo ka mid ah macaamiisheennu maaha not laakiin mararka qaarkood dadaalka ay ku bixiso ka jawaab celinta iyo sharraxaadda sababaha aannu qabanay waxay ka fogaysaa shaqada dhabta ah lafteeda.
Mid ka mid ah tixraaca muhiimka ah wuxuu ahaa in kharashkooda kaliya is istiraatiijiyadda koritaanka dabiiciga ah ee lagu dabagalayo khadka tooska ah. In kasta oo aan jeclahay xaqiiqda ah in aan taas mas'uul ka nahay, haddana waxay igu cabsi gelineysaa aniga in aniga tani ay tahay istiraatiijiyadda kaliya ee lagu maal-galinayo. Waxaan marar badan dadka u sheegay in dhisidda joogitaanka orgaanikada ee khadka tooska ah ay la mid tahay dhisida dukaanka, makhaayad ama xafiis. Bakhaarku waa inuu ku yaal bartamaha (raadinta iyo bulshada), waa inuu soo jiito soo-booqdayaasha saxda ah (naqshadeynta iyo farriinta) waana inuu u beddelaa rajada macaamiisha (wicitaanada waxqabadyada iyo degitaannada bogagga).
Laakiin haddii aad dhisto dukaan qurxoon, si fiican u hel, oo u rogi kara martidaada macaamiisha… shaqadu ma dhammaan:
Weli waxaad u baahan tahay inaad si firfircoon u shaqeyso kor u qaad dukaankaaga. Waxba igama gelin cidda aad tahay, waa lagama maarmaan inaad halkaas u baxdo oo aad riixdid hilibka, dhisatid kuwan soo socda, iyo inaad dadka kale dhex gasho bulshada. Dukaan weyn oo kuyaala meel aad ufiican oo ay kujiraan dad iyo badeecooyin waawayn ayaa wali ubaahan kor uqaadis waqti ka waqti. Milkiile ganacsi ahaan, ma fadhiisan kartid oo ma sugi kartid inay meheraddu timaaddo, waa inaad raadisaa intaad sugayso istaraatiijiyadda suuqgeynta ee internetka inay horumariso.
Xeeladaha dabiiciga sida erayga afka laga yaabaa inay kobciso ganacsigaaga, laakiin maaha xawaaraha aad ugu baahan tahay! WOM waa istiraatiijiyad fantastik ah waxayna caadi ahaan soo saartaa hogaamin tayo sare leh. Laakiin tilmaamahaasi waqti ayey qaadanayaan - markaa waxaa laga yaabaa inaad bixiso dhiirigelin dheeri ah si taraafikada aad dhaqso ugu wado. Ama waxaad ubaahantahay inaad si fudud ugu iibsato taraafikada mushaharka gujinta, kafaalaqaadka iyo xitaa xayeysiinta banner. Way qaali tahay, laakiin waxay kaa dheereyn kartaa taraafikada badan.
Koritaanka noolaha wuxuu qaataa waqti. Istaraatiijiyad suuq geyn weyn oo internetka ah ayaa dhiseysa ku xirnaanta iyo maamulka xoogaa yar markiiba. Maaddaama aad bixinaysid biilasha suuqgeynta, isbeddellada kor u kaca had iyo jeer maahan kalsooni marka ay jiraan biilal badan oo soo socda oo ka badan dakhliga… laakiin waa inaad daawataa jiiradaas kor u kaca iyo isbeddelka oo aad fiirisaa sannad ka baxsan, 2 sano ka baxsan iyo 5 sano baxay Ganacsiyo badan ayaa maalgashada khadka tooska ah waxayna filayaan inay heli doonaan dhammaan ganacsiga ay u baahan yihiin 60 ilaa 90 maalmood ee soo socda. Inta badan maahan kiiska.
Ha ku sharraxin wax walba koritaanka dabiiciga. Ama… haddii aad sidaas sameyso, hubi inaad ka tagto waqti iyo ilo si aad uga caawiso kor u qaadista iyo ku helitaanka ereyga istaraatiijiyadda suuqgeynta ee internetka. Si fudud kuma daadin kartid lacag fara badan degel internet fiican ah iyo waxyaabo fiican oo aad filan kartid natiijooyin wanaagsan - waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo. Waxa kaliya ee aan u doonayo macmiilkan ayaa ah in ay juhdi badan geliyaan waxqabad ay xakamayn karaan halkii ay ka jeedsan lahaayeen dareenkeena. Waxay nagu aaminteen istiraatiijiyadooda… oo ku xigta macmiilka, cidina ma rabto in ay ku guuleysato in ka badan sida aan annagu sameyno!
Tags: istaraatijiyad qadla'aanistiraatiijiyadda suuqgeynta internetkaistaraatijiyad online ah
5 Talooyin ee Ugu Weyn Sahanka Weyn
Emailvision iyo Pinterest: Bixi Tartankaaga Inbox
Apr 25, 2012 at 9: 55 AM
Qorshaha suuqgeynta waa inuu noqdaa mid si fiican loo soo koobay. Istaraatiijiyadda koritaanka dabiiciga ah ee khadka tooska ah waa muhiim, laakiin waxay sida ugu fiican u shaqeyn doontaa muddada fog marka ay la socoto dadaallada kale ee suuqgeynta. Marnaba ma lihid inaad ukuntaada oo dhan ku rido hal dambiil maadaama macaamiisha ay kula macaamili karaan astaantaada goobo badan oo taabasho ah.